I-Custom Plain Strip Backpack 420D 210D Polyester Drawstring Gym Bag Enophawu
Singumhlinzeki wezikhwama ze-eco esikhwameni e-china futhi iminyaka engaphezu kwengu-10 selokhu sathengisa imikhiqizo yokuqala ngokwezifiso, ubukhulu bomkhiqizo wethu buya esikhwameni esingeluki, isikhwama sikakotini wendwangu, isikhwama esipholile se-insulated, g, isikhwama sezintambo nokunye.
Uziphu eyenziwe ngokwezifiso i-6inch 8inch engagciniwe i-Fresh Keeping Tote Bag i-Orange Non-woven Heat Preservation Bag ephathekayo I-Picnic Lunch Isidlo Esisha Sokugcina
1. Chaza izikhwama zakho ezishisayo ngokwezidingo zakho;
2. Sikunikeza i-Know-How, ukuze ukwazi ukunquma, Ihluke kakhulu kangangokuba wonke umuntu uzofuna ukuba nayo;
-Khetha okubhaliwe nombala. -Khetha ukwakheka / usayizi. -Khetha i-LOGO yakho / isithombe osithandayo.
3.Izinto: -Non ephothiwe polypropylene, PP nokwelukiweyo, Polyester;
4. Uhlobo: Kuphathwe kabili;
5. Uhlobo Lokuvalwa: Ukuvulwa Okuphezulu;
6. Ukuthwala umthwalo: 5-10 kg;
I-Zipper Pink Blue Nonwoven Thermal Bag Khipha Isikhwama Sokudla Kwasolwandle Isikhwama Esingavaliwe Sokufaka
1.Okuqukethwe: Okungeluki nokwenziwe ngoboya beparele, noma okwenziwe ngezifiso;
2.Size: usayizi ngokwezifiso;
3. Umbala: Mhlophe, Mnyama noma ugcizelele ngokwesicelo sakho;
4. Ilogo: logo egcizelele
5. Ukuphrinta: ukuphrinta kwesilika kasilika, ucwecwe lwe-bronzing nokuphrinta kokudlulisa ukushisa, Ukuphrinta kwe-Thermal sublimation, Ukuphrinta Kwedijithali, njll.
Isikhwama se-Satin se-Promotional Black Virgin Drawstring Silk Wig Packaging
Umbala: Yemvelo, lendlovu, off white, white, black, blue, red, yellow, green, purle njll
Usayizi: 5 × 7 cm 7 × 9 cm 9 × 12 cm 10 × 15 cm 13 × 18 cm 15 × 20 cm 20 × 20 cm 20 × 25 cm 25 × 30 cm 30 × 40 cm 40 × 50 cm 50 × 60 cm 50 × 70 cm 60 × 60 cm njll. (Noma yimuphi usayizi kungenziwa egcizelele)
Ilogo: Usilika wokuhlola ukuphrinta, i-emboss, ukunyathela okushisayo, imifekethiso, ilebula elilukiwe, ilebula lephepha njll.
Ukusetshenziswa: Ukufakwa Kwesipho, Kwamagugu, ibhodlela, incwadi, ukuhlobisa uKhisimusi njll.